Mpitondra fahasalamana ho an'ny governemanta UK: Atsaharo ny fipetrahana eo amin'ny fefy COVID | Vaovao any UK
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Mpitondra fahasalamana ho an'ny Governemanta UK: Atsaharo ny fipetrahana eo amin'ny fefy COVID
Ny lehiben'ny fahasalamana dia manentana ny governemanta UK hanokatra dia an-dranomasina
Orinasa mpiasan'ny fahasalamana anglisy izay miasa manerana an'i Angletera manome fitsapana manokana COVID-19 ho an'ireo mpandeha fiaramanidina, olona tsy miankina ary orinasa, dia niantso ny Governemanta UK mba "hitsahatra tsy hipetraka eo ambonin'ny fefy" noho ny fanidiana ny fameperana ny fivezivezin'ny rivotra.
Ny matihanina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana dia manentana ny praiminisitra Boris Johnson hametraka andiana daty "mafy orina" sy "tena izy" izay ahafahan'ny seranam-piaramanidina haverina tanteraka.
Ny COVID dia tsy hesorina amin'ny vaksiny, noho izany ilaina maika ny mitady vahaolana maharitra hiara-miaina aminy.
Ny programa mitambatra fanandramana COVID-19 mahazatra miaraka amin'ny programa fanaovana vaksiny, ny fanaovana sarontava, ary ny fanadiovana tanana matetika no lakilen'ny famerenana ny fahatokisan-tena amin'ny dia an'habakabaka.
Ny matihanina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana dia miantso ny governemanta UK mba hanokatra ny dia an-dranomasina sy ny sidina iraisampirenena satria mino mafy izy ireo fa ny fitambaran'ny fitsapana, ny vaksiny ary ny fepetra fiarovana hafa dia afaka mampihetsika ny orinasam-pitaterana an'habakabaka sy ny indostrian'ny fizahan-tany. Tian'izy ireo ny Governemanta Britanika hanome daty mazava sy voafaritra hamelana ny famerenana amin'ny laoniny ny dia an-dranomasina eran-tany. Hatao fampandrenesana momba ny famerenana ny sidina an-habakabaka mankany amin'ny besinimaro britanika amin'ny 12 aprily io.
Ny mpamatsy fanandramana COVID Salutaris People and Test Assurance Group (TAG) dia nanangana ny toeram-panadinana PCR haingana indrindra tao amin'ny seranam-piaramanidina UK izay afaka mamaly ireo fanandramana PCR haingana sy mari-pankasitrahana ao anatin'ny 3 ora izay manolotra Fit to Fly, Test to Release, ary koa 2 - ary fitiliana 8 andro. Ny efitrano fanadinana namboarina ho tanjona, izay iaraha-miasa amin'ny seranam-piaramanidina John Lennon an'i Liverpool, dia afaka manamora ny fitsapana PCR haingana amin'ny laboratoara misy azy ao amin'ny seranam-piaramanidina. Iray amin'ireo seranam-piaramanidina irery any UK afaka manao an'io, raha ampitahaina amin'ny fihodinana 48 ora mahazatra amin'ny fitsapana PCR.
Ross Tomkins MD avy ao amin'ny Salutaris People dia nanentana ny praiminisitra Boris Johnson sy ny sekreteram-panjakana misahana ny fitaterana an-tsokosoko Grant Shapps hametraka andian-daty "hentitra" sy "tena izy" rehefa afaka averina tanteraka ny dia an-toerana, eoropeanina ary iraisam-pirenena, izay hanome fahazoana antoka ary hamerenana ny fahatokisana ny orinasam-pitaterana an'habakabaka sy ny fizahantany.
Tomkins dia mino fa fandaharana mitambatra mahazatra Fitsapana COVID-19 miaraka amin'ny programa fanaovana vaksiny, ny fanaovana sarontava, ary ny fanadiovana ny tanana matetika no lakilen'ny famerenana ny fahatokisan-tena amin'ny dia an'habakabaka. Nampitandrina izy fa raha tsy misy daty mazava napetraka mandritra ny fanambarana ny 12 aprily fa mety hitera-doza ny governemanta ny UK ary ny toekarena maneran-tany izay lasa "krizy ara-toekarena lehibe kokoa noho izay atrehantsika ankehitriny."
Nampitandrina koa izy ny amin'ny "baomba mandalo fotoana" amin'ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana izay hisy fiatraikany ary handresy ny NHS sy ny fomba fitsaboana tsy miankina mandritra ny am-polony taona ho avy.
“Tsy afaka manohy mihetsika toy izao ny governemanta ary manolotra fihenjanana toy izany amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka intsony. Ny tsy fahatapahan-kevitry ny governemanta sy ny hetsika momba ny famerenana amin'ny laoniny ny sidina an'habakabaka dia tsy fahaizana tsara indrindra ary tsy tamim-pitandremana faran'izay ratsy. Mila daty mazava sy mazava momba ny famerenana amin'ny laoniny ny dia an'habakabaka isika. Raha tafiditra ao anatin'io drafitra io dia tokony hisy famelana mazava amin'ny fanandramana COVID-19, ny fanaovana sarontava, ny fanalavirana ny fiaraha-monina ary ny fanadiovana tanteraka ny tanana. Mino aho fa hanaraka an-tsitrapo ireo fepetra ireo ny besinimaro raha toa ka midika izany fa afaka manohy ny dia an-dranomasina izy ireo, mankafy ny fialan-tsasatra sy fialantsasatra fialantsasatra indray. ”
Notohizany hoe: "Ny zava-misy tsotra dia izao dia ny UK Plc dia trosa 2 tapitrisa tapitrisa tapitrisa dolara ankehitriny, miditra amin'ny rindrina ny orinasa, very asa ny olona. Manana orinasam-pitaterana an'habakabaka sy fitsangatsanganana lehibe indrindra eto an-tany isika izao eo am-paran'ny fianjerany ary mety hiala ara-bakiteny mandritra ny alina. Raha tsy misy drafitra mazava sy matanjaka ary azo antoka ny daty marina azo averina indray ny dia an-habakabaka, tsy afaka manohy miaina ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy orinasam-pitaterana.
“Tsy lazaina intsony ny fiatraikany mahatsiravina nananan'ny COVID teo amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fahasalamany amin'ny ankapobeny. Nandritra ny fomba fanao ara-pahasalamana momba ny asa, dia nahita fitomboan'ny mpiasa sy marary mararin'ny fihenjanana, tebiteby ary fikorontanan'ny musculoskeletal ao anatin'izany ireo manana Long COVID. Ny olana toy izany dia misy fiatraikany lehibe amin'ny andavanandrom-piainany sy ny fahafahany miasa any am-piasana. ”